Mogadishu Journal » 2019 » October » 9
Slightly over $18 million in the financial year 2018 cannot be accounted for, the Auditor General has said in a report which also implicates all arms of government including Banaadir Regional Administration for failing to submit their financial statements for audit. The report,...
Wafdigii dowladdu dirtay Puntland oo faahfahiyay kulamadii ka dhacay Boosaaso
Mjournal :-Wafdi Wasiiro ah oo shalay tagay Magaalada Boosaaso ayaa maanta dib ugu soo laabtay Muqdisho waxaana ay faahfaahin ka bixiyeen waxyaabihii ay ka wada hadleen maamulka Puntland. Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in Puntland ay ka wada...
Dayuuurad shil ku gashay garoonka Aadan Cadde
Mjournal :-Shil dayuuradeed ayaa galabta ka dhacay garoonka dayuuradaha Aadan cadde ee magaalada Muqdisho ka dib markii dayuurad ay u bixi waayeen lugaha ay soo degtay taayero la’aan. Dayuuradan oo aheyd nooca yar yar ee xamuulka qaada ayaa xabadka dhigatay dhabaha ay dayuuraduhu...
Mjournal :-Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa sheegay in aanay marnaba aqbali doonin cid kasta oo is hor-taagta dib u yagleelida Qaranimada Soomaaliya, isla markaana aanu gorgortan ka geli doonin. Khudbad uu ka jeediyay Furitaankii...
Mjournal :-Saraakiisha militariga Turkiga ayaa sheegay in ciidamadooda ay diyaar u yihiin inay billaabaan howl-galka muddada la qorsheenayey ee ka dhanka ah ciidamada Kurdish-ka ee gudaha dalka Syria. Ciidamadan, oo Ankara ay ku sheegtay inay yihiin argagixiso, ayaa Reer...
Mjournal :-Xafiiska Hanti-dhowraha guud ee Soomaaliya ayaa soo saaray Warbixin sanadeedka ee baarista Hey’adaha maaliyadda dowladda, waxa ayna warbixintan banaanka soo dhigtay musuq-maasuqa ka jira hey’adaha Dowladda iyo lacago la lunsaday. Warbixinta uu soo saaray Xafiiska...
Kulan deg deg ah oo dhuusa-Mareeb uga socdo hoggaanka Ahlusunna
Mjournal :-Wararka laga helayo Magaalada dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi uu Maanta kulan aan caadi aheyn uga socdo Xarunta Inji hoggaanka Ururka Ahlusunna Wal-jamaaca ee ku biiray Galmudug. Kulanka oo Albaabada u xiran yihiin ayaa wararka...
Guddiga Farsamada Maamul Dhisidda Galmudug oo la Magacaabey
Mjournal :-Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u- heshiisiinta XF Soomaaliya ayaa magacowday Guddiga Farsamada Maamul Dhisidda Dowlad Gobaleedka Galmudug, kaas oo maalmihii la soo dhaafay la hadal haayey in la Magacaabayo. Guddigaan oo ay Magacaawday Wasaarada Arrimaha...
Madaxweyne Farmaajo oo maanta furaya Kal-fadhiga 6aad ee labada Aqal
Mjournal :-Maanta oo Arbaco ah ayaa la filayaa in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu furo Kal-fadhiga 6-aad ee labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya,kadib markii muddooyinkii la soo dhaafay ay Xildhibaanada fasax ku jireen. Xafladda furitaanka...
Ciidamo ka tirsan Booliska sida gaarka u tababaran oo qarax lagula eegtay duleedka Muqdisho
Mjournal :-Faah faahin ayaa ka soo baxaya qarax miino oo xalay fiidkii lagula eegtay duleedka Muqdisho Ciidamada Booliska gaarka u tababaran ee loo yaqaano Haramcad. Qaraxan ayaa Ciidamada lagula eegtay agagaarka Siinka Dheere, waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray...